ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်အလုပ်အကိုင်များ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ထမ်းသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဒေါ်လာဘီလျံစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်. လေ့ကျင့်သင်ကြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများမြင့်မားသောဝယ်လိုအားများမှာ. ဤအကြီးမားအလုပ်ခွင်ကိုမကြာခဏကွဲပြားခြားနားလူဦးရေအစေခံသောကြောင့်, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်များတစ်ဦးဆေးရုံမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်ရှာဖွေတာကောင်းတစ်ခုခွင့်အလမ်းရှိသည်. ဆေးရုံများမကြာခဏဘာသာပေါင်းစုံလူတို့အဘို့ကိုကြည့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးအကူအညီနဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကောင်းစွာ-paid နှင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ. လက်ျာဘက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူတည်ငြိမ်အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်. ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့:
သူနာပြုလက်ထောက် - တစ်ဦးကလက်မှတ်သူနာပြုလက်ထောက် (CNA) အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာရယူအတူမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရသူနာပြုကူညီပေးသည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများစည်းရုံးရေး, စီမံခန့်ခွဲရေမြှုပ်ဗတ်, နှင့်ပိုပြီး. certified ရရှိထားပြီးဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျအသိအမှတ်ပြုရလေ့ကျင့်ရေးဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်အကြောင်းကိုဖွင့် 75 စာသင်ခန်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေး၏နာရီ. သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ကာစာမေးပွဲဖြေဆိုဖြတ်သန်း, သငျသညျအလုပျမှအသိအမှတ်ပြုခံရပါလိမ့်မယ်.
Phlebotomist - Phlebotomists အလှူငွေဘို့အသှေးကိုဆွဲ, သှငျး, စမ်းသပ်မှုများ, နှင့်သုတေသန. သူတို့ကအသှေးကိုပုံဆွဲကိရိယာများလည်ပတ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်. သူတို့ကတစ်ဦးလက်မှတ်ရရှိရန်ကျောင်းမှအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးဖြုန်းရန်မလိုပါ. Phlebotomy လေ့ကျင့်ရေးယူ4သို့ 8 လများ.
မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးလက်ထောက် - တစ်ဦးကနေအိမ်ကျန်းမာရေးလက်ထောက်မသန်စွမ်းကူညီပေးနေတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်, သက်ကြီးရွယ်အို, ထိုကဲ့သို့သောရေချိုးအဖြစ်တစ်ရက်-to-နေ့ကတာဝန်များကိုနှင့်အတူသို့မဟုတ်နေမကောင်းလူနာ, ပတ်တီး, နှင့်ထိန်းသိမ်း. တစ်ဦးကနေအိမ်လက်ထောက်အများအပြားလူနာအကြားသွားလာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနာအချိန်ပြည့်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါ. တစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအိမ်မှာကျန်းမာရေးလက်ထောက်ဖြစ်လာဖို့, သငျသညျဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည် 75 သင်တန်းနာရီ, သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသရုပ်ပြ, ကာစာမေးပွဲရှောက်သွား.
သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက် - သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းရုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အခြေခံလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပြုပါ. ဥပမာ, တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းလက်ထောက်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတှကျစိတျရှညျရှညျကိုပွငျဆငျစခွေငျးငှါသို့မဟုတ်သူဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ရုံးများအတွက်လူနာမှတ်တမ်းများစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံဖြစ်နိုင်သည်. လေ့ကျင့်ရေးဖြည့်စွက်ဖို့နှစ်နှစ်မှကိုးလကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါသည်, ကလက်မှတ်င်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်, ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်ဘွဲ့.
- ရှာတွေ့သည် မှတ်ပုံတင်သွားလက်ထောက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို
အနှိပ်ကုထုံး - တစ်ဦးကအနှိပ်ကုထုံးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြွက်သား manipulate ဖို့ထိကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. ဤသည်တင်းမာမှုသက်သာရာနိုင်ပါတယ်, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်လူနာအပန်းဖြေဖို့နာကျင်မှုနှင့်ခွင့်ပြု. သင်တစ်ဦးအနှိပ်ကုထုံးဖြစ်မယ့်လိုင်စင်လိုအပ်. အနှိပ်ကုထုံးလိုင်စင်ရယူဘို့ဥပဒေရေးရာနိမ့်ဆုံးနာရီပြည်နယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား, ဤနိမ့်ဆုံးကနေအထိ 330 သို့ 1,000 နာရီ.
ဆရာဝန် - ဆရာဝန်ဆရာဝန်ကိုဆိုလိုသည်. ဆေးသမားလူနာရောဂါနှင့်ဆက်ဆံပါ. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာဆေးရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေ့အကျင့်လည်ပတ်စေခြင်းငှါ. ဆေးသမားအများအပြားအထူးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, ကလေးအထူးကုအပါအဝင်, မိသားစုစောင့်ရှောက်မှု, ကင်ဆာပညာရပ်, နှင့်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှု. ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်, ကျောင်းသားများကိုနေထိုင်ခွင့်သင်တန်းသုံးခုရှစ်နှစ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဘွဲ့ကြိုကောလိပ်၏လေးနှစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းလေးနှစ်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်.
ကနျြးမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင် - တစ်ဦးကကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင် (HIT အမျိုးအစား) ဘေးကင်းလုံခြုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်, တိကျမှု, ထယနေ့အထိ. အားလုံးနီးပါးကဤမှတ်တမ်းများကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း. ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်အလုပ်လုပ်နေလူအများစုဟာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်၌ရှိသောတွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီကိုင်.
- ရှာတွေ့သည် ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို
ဆေးဆိုင်နည်းပညာရှင် - ဆေးဝါးပညာရှင်များဆေးဝါးလူနာကူညီရန်ကူညီ. သူတို့ကမူးယစ်ဆေးအမည်များနှင့်အသုံးပြုမှုနားလည်ရမယ်. ဆေးဆိုင် Tech ဆေးဝါးများ dispense နှင့်မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုသိ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်သို့မဟုတ်စေပါဘူး. ဆေးဝါးပညာရှင်များလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်. လက်မှတ်နှင့်တွဲဖက်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များဖြည့်စွက်ဖို့တစျနှစျခုနှစျအထိကြာနိုင်ပါတယ်.
မှတ်ပုံတင်ပြီးသူနာပြု (RN) - မှတ်ပုံတင်သူနာပြုဆေးရုံများနှင့်ဆေးခန်းများတွင်လူနာစောင့်ရှောက်ရေးယူ. သငျသညျတခုတွဲဖက်ဘွဲ့ရတဲ့က RN ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, ဘွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးရုံပရိုဂရမ်မှတဆင့်ဒီပလိုမာ. ထိုအခါသင်ကအမျိုးသားကောင်စီ licensure စာမေးပွဲ ယူ. ဖြတ်သန်းရမယ်. တချို့ကကျောင်းများအွန်လိုင်းသူနာပြုဒီဂရီပူဇော်.
Radiologic နည်းပညာရှင် - Radiologic နည်းပညာသမားပုံရိပ်သုံးပြီးစာမေးပွဲလုပ်ဆောင်, ထိုကဲ့သို့သော X-ray နဲ့မှန် CT Scan ဖတ်အဖြစ်. သူတို့ကရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့လုပ်ဆောင်သည့်ပုံရိပ်စာမေးပွဲ၏ရလဒ်ရှာဖွေရေးမှာရန်လေ့ကျင့်နေကြသည်မဟုတ်. တစ်ရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုနည်းပညာရှင်ဖြစ်လာမှတွဲဖက်ဒီဂရီနှစ်နှစ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျအထကျကိုမွငျလြှငျအဖြစ်, အမြားအပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြိုးဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏကောင်းမွန်စွာပေးဆောင်နေချိန်တွင်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, အချိန်ကတိကဝတ်, နှင့်တာဝန်ယူမှု. သငျသညျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်လိုလျှင်ဤအမှုအရာကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင်:
ဖတ်6ကနျြးမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်ရာတွင်မတိုင်မီစဉ်းစားရန်အမှုအရာ
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုတွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီသို့မဟုတ်ဘွဲ့ရဖို့ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်ဆိုပါက, သင်ပညာရေးအတွက်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆန္ဒရှိရှိမရှိစဉ်းစားသင့်တယ်. သငျသညျကနျြးမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်. သငျသညျယခုတိုတောင်း-သက်တမ်းလက်မှတ်ရတဲ့နှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်နောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိတက်ရွေ့လျားထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,. ဥပမာ, သငျသညျ CNA အဖြစ်စတင်တစ်ဦး RN ဖြစ်လာမှတက်သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်နိုင်.
ပဌမ, သင်တို့အဘို့အလေ့ကျင့်ချင်သောအလုပ်ကိုရှေးခယျြ. ထိုအခါ, လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်., သငျသညျအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျောင်းတက်နိုင်ပါတယ်, လေးနှစ်တက္ကသိုလ်ကိုသွား, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလေ့လာ.
သင်သည်သင်၏အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သင့်. RCO ရဲ့အခမဲ့ GED program ကို သင် GED စာမေးပွဲပြင်ဆင်ကူညီပေးပါမည်
ယောဘသည် Corps ငယ်ရွယ်နှင့်အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်မရွေးအခမဲ့ပညာရေးနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းကမ်းလှမ်းတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် 16 သို့ 24. ယောဘသည် Corps လေ့ကျင့်ရေးကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပါဝင်သည်: CNA, သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်, ဆေးဆိုင်နည်းပညာရှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်, ကနျြးမာရေးယူနစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး, နှင့်လိုင်စင် / သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူနာပြု.
သငျသညျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရည်အချင်းများသို့မဟုတ်ဒီဂရီရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်အထူးပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာကိုင်ဆောင်သူ (SIVs) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.